IPhone tsy misy jack headphone? Amin'ny Apple dia azo atao | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iPad, iPhone
Ny tsaho farany dia manondro ny mety hisian'ny iPhone 7 tsy misy kapila finday mba hahazoana fitaovana manify kokoa noho ilay ananantsika ankehitriny. Ary tsy mieritreritra ve ianao fa manify kokoa io, satria 1mm ihany no azo, na dia eo aza ny fiheverana ny hatevin'ny fitaovana ankehitriny dia fihenam-bidy lehibe izany. Ary toa ny laharam-pahamehana hahazoana ny fitaovana manify indrindra eny an-tsena no laharam-pahamehana amin'ny lafiny hafa, toy ny bateria. Aiza ny fetra? Mendrika ny hahavery mpampitohy manerantany toa ny jack 3,5mm ve hanaovana fitaovana iray izay efa tena manify na manify aza?
1 Tombontsoa amin'ny mpampitohy amin'ny Lightning
2 Tselatra, natao hanjavona
3 Headphones Bluetooth, ny safidy hafa izay tsy tadiavin'ny rehetra
4 Efa misy precedents ao amin'ny Apple
Tombontsoa amin'ny mpampitohy amin'ny Lightning
Ny tombony azo avy amin'ny mpampitohy Lightning amin'ny Jack 3,5mm amin'ny resaka kalitaon'ny feo dia tsy azo lavina. Mazava ho azy fa miankina amin'ny loharanom-peo ny feo dia handeha any amin'ny headphones antsika fa tsy mila fanovana ary manana kalitao mitovy amin'ny niandohany. Midika izany fa raha mampiasa rakitra tsy voafehy na serivisy mozika toa ny Tidal isika dia hankafy ny kalitaon'ny feo miavaka, mazava ho azy fa miankina amin'ny kalitaon'ny telefaona. Ny mpampitohy jack nentim-paharazana dia bottleneck izay efa miteraka fatiantoka kalitao an-tery, na dia miankina amin'ny terminal lazaintsika aza, dia ho tsikaritra kokoa izany.
Fa ny fahaverezan'ny mpampitohy jack dia midika fa tsy afaka mampiasa headphone fotsiny isika amin'ny mpampitohy Lightning (ho fanampin'ireo izay mampiasa fifandraisana Bluetooth). Noho izany dia tsy maintsy miandry ny mpanamboatra miloka amin'io safidy io isika dia hiseho ireo kojakoja mifanentana. Vao tsy ela akory izay i Phillips dia nampiditra ny Fidelio niaraka tamin'ny mpampitohy Lightning, saingy amin'izao fotoana izao dia zara raha misy ny katalaogy misy. Azo antoka fa Apple, raha nanapa-kevitra izy, dia hanavao ny headphones Beats mba hifanaraka, saingy ireo no kojakoja izay tsy tian'ny rehetra noho ny feony hafahafa ary tsy takatry ny poketra maro.
Tselatra, natao hanjavona
Ny mpampitohy Lightning dia somary mbola tanora ihany, fa na eo aza ny fiheverana an'i Apple raha tsy izany, dia ho mpampitohy izay tsy maintsy hanjavona na ho ela na ho haingana. Ao amin'ny Vondrona eropeana dia efa nametraka daty manokana hampiasa ireo fitaovana finday rehetra ireo mpampitohy ireo, ary toa USB-C no handresy ny lalao. Raha hitranga na ho ela na ho haingana ny fanovana, amin'ny farany dia hanjavona amin'ny iPhones sy iPads ny tselatra ary midika izany fa ho lany andro ny headphone miaraka amin'ity fifandraisana ity.
Eny, fantatro fa maro aminareo no hieritreritra fa hisy foana ny safidy mitondra adaptatera kely ahafahantsika mampiasa headphone mahazatra amin'ny Lightning na ireo izay manana fifandraisana Lightning amin'ilay mpampitohy vaovao rehefa tonga izy io, saingy midika izany fa mila mandany ny vola amin'ny sombin-javatra kely izay tsy maintsy entintsika rehefa te-hihaino mozika eny an-dalambe isika.
Headphones Bluetooth, ny safidy hafa izay tsy tadiavin'ny rehetra
Toy ny ankamaroan'ny mpandahateny iPhone sy iPad, izay nandao ireo mpampifandray ara-batana hivadika teknolojia tsy misy tariby (Bluetooth na Air Play), toa manaraka lalana iray ihany ny headphones. Ny fomba tsara indrindra ahazoana antoka fa hiasa amin'ny telefaona misy anao ny headphone toa ny mividy azy ireo amin'ny fifandraisana Bluetooth. Saingy vidiny ity safidy ity: ny kalitaon'ny feo.
Marina fa efa misy écouteur hanararaotra ny teknolojia Bluetooth farany hahatratrarana kalitaon'ny feo tsara indrindra, saingy mbola eo ambanin'ny zavatra azo tratrarina amin'ny headphone mifandray amin'ny tariby izy ireo. Ny mangataka mafy indrindra dia mbola miketrona amin'ny telefaona finday, ary izy ireo koa dia kojakoja misy vidiny lafo be raha irinay hanana kalitao tsara izy ireo.
Efa misy precedents ao amin'ny Apple
Ny zavatra voalohany hitranga amin'ny iray rehefa mamaky ireo tsaho ireo dia vaovao fenoina ao anatin'ny herinandro tsy misy mihetsika firy, fa ny tena izy dia efa misy precedents izay manondro fa azo atao tsara izany. Apple dia efa nandao ny kapila CD / DVD raha toa hadalàna ny fanaovana izany, ary vao tsy ela akory izay dia nandefa solosaina finday misy fifandraisana USB Type-C. tokana. Ao Cupertino dia manana ny sori-dalan'izy ireo izy ireo ary toa tsy miraharaha firy izay eritreritry ny hafa. Raha efa nodinihinao izao fa lafo ny jack an-telefaona, manamboatra ireo mpampifandray vaovao ireo mpanamboatra headphone satria tsy hisy hampiverina azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » IPhone tsy misy jack headphone? Amin'ny Apple dia azo atao izany
Tsara ry Luís, arahaba soa amin'ny podcast-nao, tsara be!
Ny famakiana ity lahatsoratra ity androany aorian'ny fihainoana ny podcast isan'andro anao dia mamela anao ho gaga kely, inona ireo fetran'ireo izay mahatonga ny sakan'ny jack? Ampiasaina amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny tontolon'ny feo manontolo izy io, fantatro izay mametra sy afaka bottleneck dia ny fomba fanehoanao hevitra momba ny kalitaon'ny loharano (indrindra ny dac izay entiny) ary mazava ho azy ny endrika sy kalitaon'ny mozika izay ampiasainao, somary geek aho amin'izany, saika manana ny tranomboky iTunes manontolo ao amin'ny Apple Lossless Audio aho amin'ny kalitao faran'izay tsara (hira manodidina ny 50-60mb sy manodidina ny 1000 kbps), mampidina ahy ny mb pro, fa misy audio manokana kosa fitaovana Tsy hoe ampiasako, ary mampiseho be dia be, ny jack dia mitovy, ny ekipa an'arivony € maro dia manana jack ho an'ny vokatra am-peo.
Ny tombotsoan'ny tselatra ho mpampitohy feo dia tsy nazava tamiko ihany koa, raha azonao atao ny manazava kely momba ilay lohahevitra satria ny marina dia tsy fantatro ny tombotsoany, satria ny tselatra tsy afaka manohana ireo famantarana analogy irery.
Miarahaba ny ekipa Actualidad iPad!
Valiny tamin'i Kevin
Matahotra aho hamaly anao aorian'ny nametrahanao azy. Tsy manam-pahaizana momba ny feo aho ary manana sofina iray koa manoloana ilay iray hafa, fa ny vakiako rehetra dia ny tombony azo amin'ny famoahana nomerika raha oharina amin'ireo analogy ... Na dia marina aza fa ny ankamaroan'ny purista dia mbola maniry ny analogue satria izy ireo «mahatoky amin'ny zava-misy».
Ny fanavaozana WhatsApp vaovao dia manampy fiasa 3D Touch bebe kokoa
Ny vokatra Apple no be mpitia indrindra tamin'ny Black Friday 2015, hoy ny Target.com